गोरखा छेपेटारका यी योहन्ना, जसले चार घण्टामै बनाएर चल्ला कोरल्ने मेसिन | Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
गोरखा छेपेटारका यी योहन्ना, जसले चार घण्टामै बनाएर चल्ला कोरल्ने मेसिन
Published On : २२ बैशाख २०७७, सोमबार १४:४७
खोरमा चारवटा लोकल कुखुरा थिए । ५० वटा अण्डाहरु थिए । सबै खाएरै सक्ने चलन थियो । एउटा साधारण लहड चल्यो र चल्ला कोरल्ने तापक्रम कति चाहिने रहेछ भनेर गुगलमा खोजे । ९९.७ डिग्री रहेछ । क्लिनिकल थर्मोमिटर किनेर ल्याए र ओथारो बसेको कुखुरामा नापजाँच गरे । सही रहेछ । तापक्रमको र ६५ देखि ८५ सम्मको आर्द्रता मिलायो भने चल्ला निकाल्न सकिँदो रहेछ भन्ने निश्कर्षमा पुगे ।
प्लाई, प्लास्टिक र सिसाको प्रयोग गरेर एउटा बाकस तयार गरे । त्यहाँ तापका लागि सय वाटको बत्तीको जोडे । तापक्रम नियन्त्रण गर्ने थर्मोस्टेट जोडे । आद्र्रताका लागि पानी राखे । आद्र्रता मिलाउनका लागि ह्युमिडिफाइड पाइएन । बिकल्पमा सामान्य नाइक्रोम तार प्रयोग गरे । यति सब बनाउन उनलाई जम्मा चार घण्टा लाग्यो ।
योहन्ना अहिले गोरखा क्याम्पसमा विज्ञान शिक्षा बिषय(चौथो बर्षमा) पढ्दैछन् । स्थानीय तारा माविबाट १० कक्षा उतीर्ण गरेपछि उनले लक्ष्मीबजारको महालक्ष्मी माविबाट विज्ञान विषयमा १२ कक्षा पास गरे ।
जापान जानका लागि भाषा सिकिसकेका थिए । जापानका लागि आवेदन पनि गरिसकेका थिए । भिसा आउने निश्चितप्राय थियो ।
‘लकडाउन नभएको भए यतिबेला त म उँडिसकेको हुन्थेँ’, योहन्नाले भने ।
ठूलो क्षमताको एग इक्यूवेटर बनाएर व्यवसाय गर्ने रहर उनले सुनाए । ‘एकहजार ५६ क्षमताको एग इन्क्यूबेटरलाई एकलाख जति पर्ने रहेछ । मैले बनाएँ भने १० हजार जतिमा बन्छ । अब यही मेसिन बनाएर गाउँलेको कुखुराको चल्ला कोरल्ने काम गर्छु । अस्ति गाउँमा गएको थिएँ । बाहिरबाट चल्ला बेच्न ल्याएका रहेछन् । गाउँमा चल्ला किन्नेको धुइरो थियो । मैले बनाएर बेचेँ भने त कस्सो नकिन्लान् र ?’